Semalt: I-Web Scrapers ye-Free ye-Programmer
Ukuba uye wakudinga ukutsala idatha kwiziko lesithathu, amathuba okukhetha ama APIs ezisemthethweni. Nangona kunjalo, kukho i-web scrapers kwi-intanethi eyenza umsebenzi wakho ube lula, kwaye njengomprofeti okanye unjiniyela, unokukhipha idatha kwiindawo ezininzi njengoko ufuna.
Idatha ye-Scraper yinkqubo elula kodwa enamandla kwaye enobuncedo yokukrazula kwewebhu. Ayithethi kuphela imifanekiso kunye neetekisi kodwa ihlalutya uluhlu kunye neetafile ezivela kumaphepha omnye okanye amaninzi. Emva koko, esi sixhobo siguqula okanye sisindisa idatha ekhishwe kwiifayile ze-XLS ne-CSV. Ikhululekile ngeendleko kwaye iza nezinto ezininzi. Nangona kunjalo, abaprojekthi kunye nabaphuhlisi bezobugcisa kufuneka basebenzise inguqu yalo ehlawulelwayo ezayo neenkcukacha ezininzi kwaye ayifuni naluphi na umgca.
I-Web Scraper isandiso se-Chrome esinokudibaniswa lula kunye nesiphequluli sakho se-Google Chrome. Ivumela abasebenzisi ukudala i-sitemaps ukubonisa indlela kufuneka isayithi ihambe ngayo kwaye udidi lweedatha olufunekayo ukuba luyihlume. Abaqulunqi kunye nabathuthukisi bafuna nje ukongeza ukongezwa kwi-Chrome yabo kwaye baqale ukukhipha idatha.
Xa kuziwa kwidatha yenkcazelo, abaphuhlisi kunye nabaprogram kufuneka babhekane nemingeni eninzi. Nangona kunjalo, nge-Scraper, umsebenzi wabo unokwenziwa ngokukhawuleza kwaye kulula kunanini ngaphambili. Le yindlela elula yokusebenzisa i-web scraper engakwazi ukukhipha idatha kwifom yeetafile, imifanekiso, uluhlu kunye neetekisi. Kufuneka ucofe kwiqhosha lase Scrape ukusuka kwimenyu yalo ekunene kwaye vumela le sixhobo lenze umsebenzi walo.
6. I-Visual Scraper:
I-Visual Scraper inkulu kulabo abafuna ukukhupha imifanekiso kunye neefayile zevidiyo. I-web scraper yamahhala ezayo kunye nekhonkco elula kunye nocofa kwaye isetyenziswa ngokubanzi ukuqokelela idatha efanelekileyo kwi-intanethi. Uza kufumana idatha yenkcazelo yangempela kwiimpapu ezifunayo uze uyithumele ngefom ye XML, CSV, SQL, kunye ne-JSON.
Le mahalaware iza neendawo ezininzi kwaye zifanelekile kwiWindows, Linux kunye nezinye iinkqubo zokusebenza. Kuya kukuvumela ukuba uchithe idatha ukusuka kumaphepha angamawaka angamashumi amahlanu ewebhu. Nangona kunjalo, inguqu yeprayimenti ingaphaya kwamaphepha angama-130 000 ewebhu ngaphandle kokuphuma.
8. iDexi.io: ​​
Eyaziwa nangokuthi i-CloudScrape, iDexi.io yi-web scraper eyaziwayo. Ivumela abasebenzisi ukuba babambe idatha kwaye banike iintlobo ezahlukeneyo zeerobhothi ukufumana umsebenzi owenziwe lula. Ingenza imisebenzi ehambelana nokukhawulela, ukukhutshwa kunye nokupakisha kwedatha.
I-Webhose.io yi-freeware esinikeza nge-server proxy engaziwa kwaye isebenza ngomsebenzi ngokukhawuleza. Awuyikukrazula kuphela iindawo zakho kodwa kunye nedatha yolondolozo; kuthetha ukuba akuyi kuba nexhala malunga nokulahlekelwa ulwazi oluncedo njengoko luya kugcinwa kwifolda yalo yoLondolozo.